Ciidamada Ilaalada waddooyinka Puntland oo tababar loo Furay – Radio Daljir
Maarso 13, 2016 3:05 b 0
Bacaadweyn, Maarso 13, 2016 (Daljir) —Agaasimaha Guud ee Cashuuraha Beriga Wasaaradda Maaliyadda Puntland Cali Jaamac Gaashaan (Cali Farxaan) ayaa maanta tababar u furay ciidanka ilaalada wadooyinka, wuxuuna tababarkaani socon doonaa muddo shan maalmood ah ,waxaana lagu baran doonaan shuruucda wadooyinka iyo jiheynta gaadiida taasoo lagu dhaqayo gaadiidleyda sharciga.
Ciidamada Tababarkan la siinayey oo dhowr iyo taban gaarayey ayaa tababarka ku qaadanaya Xarunta Cashuuraha beriga ee magaalada Boosaaso.
Mudane Cali Farxaan oo furay Tababarka ayaa kula dardaarmay ciidanka iney ka faa’ideystaan casharada ay bixinayaan khabiirada isla markaana looga fadhiyo wax u qabashada bulshada.
Taliyaha Taraafikada gobolada Bari iyo Karkaar Maxamed Finiin Yuusuf ayaa ku dheeraaday shuruucda iyo ganaaxyada laga doonayo iney sameeyaan Ciidamada ilaallada wadooyinku.
Tababarkan ayaa qeyb ka noqonaya dadaalo muddooyinkii danbe ay waday Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland gaar ahaa waaxda Cashuuraha laguna tayeynayo ciidamada aqoontooda.